Indlela Yokuzigcina Esivandeni Sakho Amathuluzi e Umumo Omkhulu - China Richina
Indlela Yokuzigcina Esivandeni Sakho Amathuluzi e Umumo Omkhulu
Uthanda ingadi? Nge nengadi ethandwa kangaka kulezi zinsuku, azikho emakhaya eminingi engahileli okungenani oyedwa patch, imbiza noma isitsha okuthile ezikhulayo kulo. Kodwa cishe, ukukhokha eziningi ukunakekela izitshalo zakho hhayi kakhulu amathuluzi usebenzisa ayowalima. Amathroweli, amageja abakuthola, namafosholo ukuthatha eziningi kabi ngesikhathi yokukhula, futhi uma uthatha isikhathi esincane sizithande, bazobuka zisebenze kangcono futhi isikhathi eside ngawe.
Ngaphambi sikhuluma igiya engadini usunayo, khumbula lapho uthenga Ingadi Amathuluzi omusha kokuchitha okwengeziwe amathuluzi eliphezulu uzokusindisa usizi nemali ngokuhamba kwesikhathi. Khokhela okuncane ithuluzi eziyohlala, kunokuba amathuluzi ezishibhile ukuthi bayoguga futhi kudingeka ukushintshwa njalo. Bese usebenzisa amagama afanele! Njengoba isisho sibonisa, lapho konke onakho kuyinto isando, konke kubukeka njengenyoni nail-kodwa kusetshenziswa ithuluzi okuthile it is hhayi yakhelwe ukwenza kuyindlela esheshayo ngokonakalisa noma ukuwuchitha (ngisho uzilimaze enqubeni) . A lokwela eside iphathwe akuyona crowbar, ngemuva ngembazo akuyona isando sledge, kanye pruner isandla asihloselwe wabona ngokusebenzisa legatsha nanye intshi. Uma udinga ukwenza okuthile eqoqweni lezinto zakho zamanje amathuluzi Akukhona, cabangela ukuthenga okuthile ofanele, eboleka ephuma kumngani, noma ukuqasha omunye amahora ambalwa (isixazululo esihle okukhethekile amathuluzi ngeke kudingeke ngokuvamile).
Uma une iqoqo ezinhle Ingadi Amathuluzi, nazi 6 izindlela ezilula silondoloze kubo, siqale isitoreji!
Gcina Them Ngokuphepha
A elachitheka ungumngane ithuluzi best ngoba ngemva kabi, isitha inombolo eyodwa amathuluzi kuyinto nokuchayeka elangeni nasemakhazeni. Zikhange njengoba kungenzeka ukushiya amathuluzi wakho lapho uzodinga kubo kusasa (noma ngeviki elizayo), Don`t ukukwenza! Gcina wonke amathuluzi akho e umjondolo, igalaji, noma ngisho weatherproof ithuluzi isitoreji iyunithi engadini (ibhokisi leposi yasemakhaya kwenza stash omkhulu weatherproof ababezithola phansi benze amathuluzi isandla), futhi kuyohlala kaningi isikhathi eside kunaleso amathuluzi ukuchitha isikhathi phandle ilanga, imvula, futhi umoya (noma get kufihlwe otshanini obude bese akhwela).
isitoreji wangaphandle okubi izibambo sokhuni, okungase roughen, ukuqhuma, ukuhlukana, eziqondileyo ukubola ngokuhamba kwesikhathi. I enhle ithuluzi yesitoreji endaweni ivikela amathuluzi wakho kusukela sezulu kodwa ivumela air kwegazi, ngakho amathuluzi kungaba Ewufrathe nokugqwala nangesikhunta mancane amathuba okuthi kwenzeke.
Inhlabathi ubamba umswakama futhi ikhuthaza nokugqwala, ngakho ngokubeka amathuluzi akho ahlanzekile kuyozisiza ukuba sithathe isikhathi esijana. Yilokho futhi indlela enhle ukuvimbela ibhithi izimpande ukhula imbewu noma isifo inhlabathi yizinambuzane kusukela adluliselwa bengonozulane. Ngaphambi ukubeka amathuluzi wakho ngikugeze off iyiphi inhlabathi noma ukhiye welayisensi yokufaka okuningi off ngommese putty (ukugcina omunye ngamunye ezindaweni zakho ithuluzi isitoreji). Sebenzisa amanikiniki (nge turpentine, uma kudingeka) ukususa isitshalo ubisi kanye inhlaka evela amathuluzi ukusika. Sisule amathuluzi sihlanza ikakhulukazi zensimbi nezingxenye sokhuni, nge amanikiniki umswakama.
Ukuvimbela ukusabalala Izifo
Uma ngabe ukusebenza isitshalo izinto ngokusobala onesifo, cwilisa amathuluzi wakho bahlanza e isixazululo isigamu bezihlikihla utshwala amanzi isigamu imizuzu emihlanu yokubulala amagciwane ngaphambi iphele amathuluzi nokugcina kwabo.
abapheki abaningi ezinhle ukwazi ukubaluleka nommese obukhali, kodwa bangaki balimi bayaqaphela ukuthi amathuluzi abukhali ukwenza ingadi imisebenzi ngokushesha, lula, futhi kwezinye izimo ezingcono kakhulu izitshalo? Ukugcina umphetho ezinhle ku ngegeja noma isandla pruner kulula futhi uzokusindisa isikhathi ngokuhamba kwesikhathi. Ungalindi kuze ithuluzi lakho selibe buthuntu: Cabanga elola njengoba nsuku zonke nokuvungula ababezithola phansi benze amathuluzi wakho!
Qala ngokubheka emaphethelweni blade. amathuluzi Ziningi flat ngakolunye uhlangothi kanti yomumo (beveled) ohlangothini reverse; nezinye amathuluzi angled nhlangothi zombili. Futhi bagcine engela "wotho." Ingabe abukhali futhi mncane ifana nommese noma nje kakhulu onqenqemeni ngensimbi engela blunt ngaphezulu? Umgomo wakho ukugcina ukucushwa sokuqala.
Baby I Metal Izingxenye
amathuluzi amaningi metal bazuze enamathela ezondile uwoyela ukuvimbela nokugqwala, ngaphandle babelana ezenziwe ngensimbi engagqwali, okuyinto liphinde libe nayo. Gcina ikani uwoyela linseed e ithuluzi lakho elachitheka kanye amanikiniki elithambile, futhi unike amathuluzi wakho bahlanza okusheshayo kanye-phezu ngaphambi ukubenza kude. Sicela Don`t ukusetshenziswa uwoyela motor ku amathuluzi akho! Inala amabhuku engadini namanje batusa, kodwa ingabe ngempela ufuna ngokubeka uwoyela motor ku nice ingadi umhlabathi wakho? Ngokuqinisekile Don`t.
Uma ubona noma yikuphi nokugqwala, sebenzisa ibhulashi wire noma Emery indwangu (inhlobo efana ifayela nail ethe njo indwangu esikhundleni amakhadibhodi esetshenziswa Metalworkers) ukuze uyisuse. Ungase futhi bagcobe kude isihlabathi oily. Gcina ibhakede eziqinile egcwele isihlabathi oswakanyiswe ngamafutha eshede yakho, futhi nje eziphonsa ithuluzi bahlanza enhlabathini izikhathi ezimbalwa. Yilokho ngokuvamile kudinga kokubili sula namafutha amathuluzi wakho ngesikhathi esifanayo.
Isimo The Izibambi Ngokhuni
Ngezikhathi sisebenzise enamathela ezondile uwoyela linseed ukuze ome, unpainted izibambo sokhuni Buff off ukweqisa nge amanikiniki ehlanzekile ngosuku olulandelayo. A kabi badlula isibambo ngeke uzibixe impela kancane amafutha, ngakho engeza enamathela mncane nsuku zonke kuze kube kukhona amafutha kancane kwesokunxele phezu ngosuku olulandelayo. Uma ungakwazi ukuthola uwoyela linseed ngesikhathi hardware esitolo sendawo, amabombo wendawo esitolo sakho ukudla yemvelo. uwoyela flaxseed ukuthi ukupheka nge into efanayo linseed uwoyela "lin" njengokungathi "ilineni," fiber eyenziwe kusukela ngefilakisi. Lokhu kubuye kuyindlela enhle ukusebenzisa amafutha ubudala flaxseed ekhishini lakho ukuthi iye yasungula uhlelo ukunambitheka off.